छुट्टा छुट्टै बैठकहरुले उठाएको प्रश्न -के जसपा फुटिसकेको हो ? || विचार
छुट्टा छुट्टै बैठकहरुले उठाएको प्रश्न -क...
छुट्टा छुट्टै बैठकहरुले उठाएको प्रश्न -के जसपा फुटिसकेको हो ?
प्रधानमंत्री केपी ओलीको अध्यादेश प्रकरणले रातारात एकीकृत भएका राजपा र संघीय समाजबादी पार्टी ओलीकै सत्ता बचाउनका लागि फेरि पूर्ववत अवस्थामा टुक्रिएर जाने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । यतिबेला दुई पार्टी मिलेर बलियो बनेको जनता समाजबादी पार्टी बिभाजित हुने खतराले पार्टी पंक्तिमा चिन्ता बढाएको छ । देशमा राजनीतिक सरगर्मी बढेको अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका गतिविधि बिगत एक महिनादेखि ठप्प छन् । कतिसम्म भने पार्टी स्थापना भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा समेत कुनै कार्यक्रम तथा विज्ञप्ति जारी गर्ने चासो नेताहरुलाई भएन ।
समग्र देश र जनताको हितलाई भन्दा आफ्नो पार्टी भित्रको गूटको स्वार्थलाई महत्व दिईरहेको ओली नेतृत्वको सरकारसँग सत्ता साझेदारीमा जान तयार हुनु जसपाको हितमा अवश्य छैन । ओलीको अहंकारले सृजना गरेको सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर दुई पक्षमा विभाजित भएको जसपा यही कारणबाट बिभाजन भयो भने नेताहरुमाथि ठूलो कलंक लाग्ने निश्चित छ ।
पार्टी फोडेरै भएपनि सत्तामा जानकै लागि जसपाका गुटगत बैठक जारी देखिन्छन् । संसदीय अङ्कगणितमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानमा रहेको जसपा भित्र वर्तमान सरकारलाई नै समर्थन गर्ने वा विकल्पमा विपक्षी गठबन्धनबाट सरकार निर्माण गर्ने भन्ने विवादले पार्टी बिभाजनको दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको खनाल–नेपाल समूहको नियमित बैठक बैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि भैरहेका छन् । तर जसपा नेपाल न वर्तमान सरकारको पक्षमा दृढ भएर उभिन सकेको छ, न विपक्षी दलहरुसँग सहकार्यका लागि नै तयार देखिएको छ ।यो अवस्थाले नेताहरुमा गूटगत भावना बिकसित भएको स्पष्ट हुन्छ ।
जसपा नेपालमा सत्ता समीकरणबारे प्रस्ट दुई धार देखिएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टीका नेताहरु केपी शर्मा ओलीइतरको सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ओलीसँग सहकार्य गर्न इच्छुक देखिएको छ ।
पार्टीको आन्तरिक विवादकै कारण बैठक बस्न नसकेको स्पष्ट छ । यो अवस्थाबाट पार पाउन नेताहरुमाथि दवाव आवश्यक छ ।
गत कात्तिक ४ गते कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेयता जसपा नेपालमा हालसम्म कुनै बैठक बसेको छैन । पुस ५ गते भएको संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलित हुँदा पदाधिकारीको बैठक बसे पनि कार्यकारिणी समिति बैठक हालसम्म बस्न नसक्नुको कारण अब खोजी हुनु जरुरी छ । नेताहरु ब्यक्तिगत लाभतिर उन्मुख भैरहेका छन् भने दर्भाग्यपूर्ण हो !
पार्टीमा औपचारिक छलफल नै नगरी जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री ओलीसँग नियमित छलफल गरिरहेका छन् भन्ने खबरहरु सञ्चरमाध्यमहरुमा आईरहेका छन् । ओलीसँग के विषयमा छलफल भयो ? पार्टीका तर्फबाट कस्ता प्रस्ताव राखियो र सरकारका तर्फबाट कस्ता जवाफ प्राप्त भए भन्नेबारे पार्टीलाई कुनै जानकारी नरहेको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सञ्चामाध्यमहरु मार्फत आफ्ना भना राख्नु परेको अवस्थाले जसपा कता जाँदैछ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ ।
यही वैशाख ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर उपस्थित भए तर जसपा नेपालका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बैठकको बारेमा पार्टीलाई जानकारी नै नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । यो अवस्थाले गर्ने संकेत के हो ?
वैशाख ६ गते लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा नेपालकै चारजना सांसदले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई समर्थन गरेको घटना र त्यहाँका कार्यकर्ताहरुले सडकबाट ब्यक्त गरिरहेको आक्रोशपूर्ण प्रतिकृयाले दुखद परिणामको संकेत गरिरहेको छ । सुरुमा मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने निर्णयमा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका सांसदहरुले एकाएक सरकारलाई समर्थन मात्र गरेनन्, उनीहरु नै सरकारमा सहभागी भएर शपथ पनि लिए । तर यसबारे जसपाभित्र कुनै छलफल तथा निर्णय भएको थिएन ।
बालकुमारीस्थित पार्टी कार्यालयमा उपेन्द्र यादव पक्षको र बबरमहलमा महन्थ ठाकुर पक्षको बैठक नियमितजसो बसिरहेको सुनिन्छ । तर, सिंगो जसपाको बैठक भने बस्न सकेको छैन । के जसपा पनि फुटिसकेको हो ? -जनधारणा साप्ताहिकबाट